Iindaba - Siyavuyisana ngokufikelela "uloyiso kabini"
Kulo nyaka, i-SNS ayigqithisanga kuphela ukuqiniswa kwebhetshi yamashishini aphezulu obuchwephesha kwiPhondo laseZhejiang ngo-2020, inombolo eyi-serial ingama-2583. Kwaye yaphumelela isatifikethi "seZhejiang Science kunye neTekhnoloji esincinci kunye nesiPhakathi" esikhutshwe yiZhejiang Science kunye neSebe leThekhinoloji.
Kwiminyaka yakutshanje, i-SNS iqhubekile yonyusa uqeqesho kunye notyalo-mali kumaqela e-R & D, iinkqubo ezilungiselelwe ngokuqhubekekayo, iitekhnoloji ezihlaziyiweyo, kunye nokuphuhlisa iimveliso ezintsha, kunye nokuseka ilabhoratri yokuvavanywa kokuvavanywa kokuvavanywa kombane ngokudibeneyo neYunivesithi yaseZhejiang. Kunyaka omnye nje ukusuka ngo-2019 ukuya ku-2020, kwasetyenziswa amalungelo awodwa abenzi bamachiza ali-13 (kubandakanya amalungelo awodwa omenzi wechiza ama-3, iimodeli ezisetyenziswayo ezisi-8, kunye namalungelo awodwa omenzi wechiza amabini).
Iziphumo ezilungileyo ziyakhuthaza, kodwa zikwakhuthaza. Ukuthembela kubuchwephesha, i-SNS iyaqhubeka nokwenza ubuchule, yonyuse utyalo-mali lwe-R & D, ityebise amandla ophuhliso lweshishini, kunye nokuphucula umfanekiso wegama lenkampani. Nika abathengi iinkonzo ezifanelekileyo. Ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha eyomeleleyo kuphuhliso lomgangatho ophezulu wenkampani!